Banovalo lokuxega kowamanqamu | News24
Banovalo lokuxega kowamanqamu
Durban - Seyithembele kodokotela iSuperSport United ngomdlali wayo omqoka emdinga ukufa emdlalweni ne-Orlando Pirates wamanqamu weNedbank Cup ozokuba ngoMgqibelo ngo-20h15 eMoses Mabhida Stadium, eThekwini.
UKaitano Tembo oyisekela likaStuart Baxter ongumqeqeshi weSuperSport oshiyayo emuva kwalo mdlalo, utshele ILANGA ukuthi babambe umoya ngesimo sika-Onismor Bhasera olimale le kilabhu icazelana amaphuzu ne-TP Mazembe yaseDemocratic Republic of Congo (DRC) kuba ngu-0-0 kowamaqoqo we-Caf Confederations Cup ngoLwesibili ebusuku, eLucas Moripe Stadium, e-Atteridgeville.
OLUNYE UDABA:Naba abadlali abahola kakhulu kunabo bonke kuPSL
"Silindele ukuthi odokotela bekilabhu basicacisele ngesimo sikaBhasera kusasa (ngoLwesihlanu) ngaphambi kokubamba indiza ebheke eThekwini. Simdinga kakhulu uBhasera kulo mdlalo kwazise noMichael Joseph Boxall waseNew Zealand akekho njengoba emele izwe lakhe kwiFifa Confederations Cup (eqhubeka eRussia)," kusho uTembo.
URonwen Williams, ongunozinti weSuperSport, uzwakalise ukuthi ufuna ukusebenzisa lo mdlalo ukukhombisa uBaxter ukuthi angamkhohlwa njengoba eseyoyibamba kwiBafana Bafana egijinyelwa nanguDean Furman okubhekeke ukuba ashaye ibuya koweBucs njengoba ebephunyuziwe koweCaf.
"Ukuqikelela ukuthi siyawunqoba lo mdlalo ngokuvimba ngisho impukane kuzokwenza ukuthi ngihlale ngizinze enhliziyweni kaBaxter, angikhumbule noma eseqoka isikwati sakhe esilandelayo," kusho lo nozinti oneshwa lokudliwa ngamagoli nxa esezintini zeqembu lesizwe.
Uqhube ngokuthi bazimisele ngokuziqophela umlando ngokuba yikilabhu yokuqala ukunqoba iNedbank Cup amahlandla amathathu.
"Ukunqoba le nkomishi kungaba yinto enhle kakhulu ukuvalelisana nomqeqeshi wethu ngezinga elicokeme. UBaxter usisize kakhulu kulezi zinyanga ezedlule siyibambe ndawonye," kusho uWilliams ogcizelele ukuthi umphumela weligi lapho behlule khona iBucs ngo-6-1 kawusho lutho.
Uthi iPirates yikilabhu enkulu, okudingeka ukuthi bawasebenzise ngendlela wonke amathuba abazowathola ukuyigoba.